Dzidziso: maitiro ekuisa iOS 9 GM pane iyo iPhone | IPhone nhau
Dzidziso: maitiro ekuisa iOS 9 GM pane iPhone
Sezviri pachena vhezheni yacho Goridhe Master kubva iOS 9 Izvo hazvizowoneka kuburikidza neOTA, saka isu tichafanirwa kuzviisa nemaoko kana tisingade kugara mubeta 5 kusvikira yave kusunungura iyo yepamutemo vhezheni mukati mevhiki. Iwe wakasimbisa mune zvakataurwa kuti iyi vhezheni inogona kuiswa isina kuva neyekuvandudza account, sezvazvakaitika neshanduro dzekare, saka maitiro acho akafanana neiya yapfuura, yakapusa, inokurumidza uye inoshanda. Kune avo vanoda kuzviedza uye vasingazive kuzviita, tinokuratidza maitiro ekuisa iOS 9 GM nemaoko.
Maitiro ekuisa iOS 9 GM pane iyo iPhone
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuenda kuwebhu imzdl.com/ios.html uye dhawunorodha vhezheni yeyedu mudziyo. Kana iwe usingazive iyo modhi yaunayo, tarisa pabhokisi.
Isu tinobatanidza yedu iPhone kune komputa yedu uye isu tinovhura iTunes.
MuTunes, tinosarudza yedu iPhone (iPad kana iPod) iri mukona yekumusoro kuruboshwe, sezvaungaona mumufananidzo.
Isu tinobatisisa ALT kiyi (Shift muWindows) uye tinya "Gadzirisa".
Isu tinosarudza iyo .ipsw yatakatora pasi mu nhanho 1 uye tinya Vhura.
Izvo zvinotizivisa kuti izvi zvichagadzirisa kune iOS 9. Isu tinobata Kugadzirisa.
Iyo iPhone ichatanga uye zvese zvichaitwa.
Nezve zvitsva, kubva pane zvishoma zvandakaedza ini handina kukwanisa kuwana chero. Ehe, ini ndaona kumhanyisa kumhanyisa uye kutenderera, asi iyo chaiyo keyboard trackpad haisati yavapo uye iyo Nhau application haina kushanda kana tisingagadzire United States senharaunda yatiri. Izvo zvinhu zviviri zvezvinhu zvandinotarisira zvakanyanya uye hazvina kuchinja. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chitsva, usazeze kuchisiya mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Dzidziso: maitiro ekuisa iOS 9 GM pane iPhone
David Prats Juan akadaro
Zvakanaka, ndakaverenga zvirevo kubva kuvanhu vakaisa iyo Golden Master (GM) vhezheni yeIOS 9 pa iPhone 5S uye ivo vanotaura kuti haina kunyorova zvachose. Kune rimwe divi, mune mamwe kunyange akambomira mhando (iPhone 5, iPhone 5C) inoshanda zvirinani kupfuura iOS 8.
Pindura David Prats Juan
Mhoro David. Ndine 5s uye ndinozviona zvirinani. Asi iwe unoziva kuti izvi zvinofamba sei, vamwe vacho vari kuita zvirinani nebhatiri, vamwe vari kuita zvakanyanya ...
Ndatenda pablo. Zvakanaka ... Ndichaimirira kuti ibude zviri pamutemo, asi ese makomendi anouya pamberi achagamuchirwa. 😀
Ah, nekuda kwekuda kuziva. Kwandakaverenga kuti zvinonyanya kuoneka kuti inononoka (zvichienzaniswa neIOS 8) zvinoita sekunge iri muControl Center.
Asi iyo 9.1 inogona kuiswa nechekare futi kana sei?
Mhoro Javi. Handina kuzviedza uye hapana ari kutaura pane chero chinhu nezveiyi vhezheni. Ini ndinongoziva kuti vamwe vane account yekuvandudza avo vakayedza iyo kutaura nezve emoji nyowani. Ivo havana kutaura kana zvichigona kuitwa pasina kuve musimudziri, uye havataure nezvematambudziko kana dzimwe nhau.
Ini ndinofanira kuita backup kana izvi zvinongo gadziridza?
Negadziriro yeparutivi, nguva dzose, angava iPhone, kombiyuta kana chero. Nguva dzose, zvingangoitika.
zvakafanira here kuva neUDID kana chero munhu anogona kuiisa?
Ini ndinobvunza zvakafanana naDavid, zvakafanira here? kana tinogona kuiisa 🙂
Ndiri kuzomisikidza GM ne backup kwenguva yekutanga muhupenyu hwangu painobuda zviri pamutemo musi wa18, ndichadzorera zvakachena, ndinokuudza Pablo.
Unonzwika seni xD
Zvinotaridza kwandiri kuti zvinoshanda zvirinani kupfuura beta 5. Ini ndangoyedza izvo zvekutanga, kuvhura kunyorera, kubvisa CC, nezvimwe. Ini handina kukwanisa zvimwe zvakawanda.
Ini ndakagadzirisa kune iyi GM uye yakazo kurodha pasi BETA 3 kugadzirisa kuti ndiise, ini handinzwisise chero chinhu, kana izvi zvichifanirwa kuve zvitsva kupfuura beta 3, handiti?
Ini ndinofunga waifanirwa kunge wabvisa yeruzhinji beta mbiri, chinhu chimwe chete chiri kuitika kwandiri, ndiri kurodha pasi beta 3 yekuvandudza, ini ndatoibvisa ndichangopedza kudzoreredza, kutangazve uye kuona kana ichimira kurodha pasi beta.
lui sete akadaro
Kana iwe ukadzorera backup, iwe unodzoreredza yeruzhinji beta mbiri, uye ichaita kuti iwe ugadzire beta 3, kunyangwe kana iri yechikuru pane GM.
Pindura kune lui sete
Ingwavaira yakadii ndikaisa iyo GM asi ini ndakawana yekukanganisa yekumisikidza saka ndakaiisa muDFU modhi kuti ndikwanise kudzokera kuna 8.4.1
Ndatove ndakaisa GM kakawanda ...
Jose Manuel Castro chigaro chinomira akadaro
Akanaka Pablo, ini ndiri mutsva mumusangano uyu uye ini ndakaisa iyi GM yeIphone 6 Plus uye zvinoita kwandiri kuti ndiwedzere kune veruzhinji beta 3! Kana iwe ukakwanisa kundipindura kuti dambudziko nderei, zvinogona kubatsira zvikuru. Kutenda uye makorokoto eiyo peji; Ruzivo rwemhando yepamusoro!
Pindura kuna Jose Manuel Castro
Nekuti iwe wawedzera pamusoro, uye iyo iPhone inochengeta yeruzhinji beta mbiri. Iwe unofanirwa kuita kudzoreredza kwakachena kweios 9 GM, uye kana iwe uchida gare gare, dzorera backup iyo ISINA HURUMENDE YEMAHARA BETA, ndiko kuti, usati wasainira iyo betas, kana zvisiri, zvicharamba zvichiitika kune iwe.
Mhoro Jose. Ini handina chandakaona chakafanana nezvinoitika kwauri, asi kuverenga makomendi, ini handizive kana ichi chinyorwa kana chimwe, ivo vanoti izvi imhaka yekuti iwe une yeruzhinji nhoroondo yakaiswa pane yako iPhone. Kuti iite kuti inyangarike, unofanirwa kuburitsa chimiro uye wotangazve iyo iPhone. Kana ikasachaoneka, watogadzirisa kare. Kana zvisiri, unodzoreredza iyo GM.
Uye unobvisa sei ruzhinji beta beta?
Zvirongwa / zvakajairwa / Maprofiles. Kubva ipapo unogona kuvabvisa.
Pablo anogona kuisa Ios9 GM pasina kunyoresa UDID Kutenda
Jimmy Durand akadaro
IMZDL zvinongedzo zvichiri kushanda? nekuti ini ndinoenda pawebhu uye pandinoda kurodha chete hombe OOPSS inoonekwa! simbisa ndapota ndatenda
Pindura Jimmy Durand
Zvakanaka, ini ndiri mutongi padhuze pano ... ini ndaive nechinangwa chekuisa iyo gm vhezheni yeios 9 asi ini ndatoverenga maonero akati wandei pano uye mune mamwe maforamu pamwe nemavhidhiyo kuYouTube ekuenzanisa uye zvaitaridzika kuti zvinononoka ....
Vanobvuma kuti inononoka pa iPhone 5s, izvo zvinondishamisa kwazvo.
Nenzira, pane chero munhu akaedza / akaenzanisa ios 9gm ne ios 8.4.1? Nezve safari safari kutsetsenura uye kazhinji ... maita basa
Zvakanaka pakupedzisira ndakaiisa, yakadzorerwa iPhone kuisa GM uye iyo Nhau application haina kuoneka
Tarisa uone izvi https://www.actualidadiphone.com/como-anadir-medios-espanoles-a-apple-news/
Ok maita basa uye Nhau app yabuda
Luis Castro akadaro
Kana uchigadzirisa kune io 9.1, whatsapp haishande kwandiri, zvinondipa kukanganisa kuti inofanirwa kuvandudzwa kubva kuchitoro cheapp asi iyo imwe chete yatove kuiswa
Pindura Luis Castro
ðº ˜¨ ˜¨ @ (@ Jacman2) akadaro
Luis Castro, zvakajairika kuti hazvishande kwauri nekuti WhatsApp haisati yagadziriswa iyo vhezheni. Iwe uchafanirwa kumirira kuti ivandudze.
Pindura kuna ðº ° ˜¨ נ αςмαи¨˜ ° ºð (@ Jacman2)
Ini ndaisa GM uye haizonditenderi kuti ndiyishandise, inondiudza kuti iyo yekumisikidza data isiriyo - chero rubatsiro? kana kuti iri kutobvunza kuti UDID yangu inyoreswe?
Ndine mubvunzo wekutora ipsw nekuti ini handioni chero yeiyo iPad 3
Pindura kuna mohamedlee99
SHAMWARI, HAZVIONEKERI KWEMAZWI302E / MUENZANISO, IPHONE 5S 64 GB, NDINGAIWANEI?
Zvakanaka, ini ndangoisa iyo ios 9 gm pane iphone 5 mangwanani ano ... uye ini ndinoona lag ... hongu ...
Zvakanaka, tiri kuenda kana zvaifungidzirwa kuti chaizvo iOS 9 yakauya kuzovandudza mashandiro uye kugadzikana kweIOS.
asi zviri q kuisa 8.4.1 sezvayanga iine ... isina jeri kana chero chinhu ... kunyangwe iri "ini ndakakurudzira" ne «» »» »» shanduko yemufananidzo »» »» »» yeiyo 9 ... asi hongu ... inoenda nechimwe chinhu chakasarudzika ... senge ios 9.1 beta ... saka ... tichaona kuti zvinotora nguva yakareba sei kujeri ... taona zvatakaona ... kanenge mwedzi tinosvika!
Ko kana ini ndichida kudzikisira kubva kuiyos 9 gm kusvika ios 8.4.1?
Toni Tur akadaro
Yakaiswa ios 9.1 pane ipad mweya, inonzwa zvishoma zvishoma (zvishoma) asi ini ndinoda nhau, keyboard, kutaridzika, kuwanda, nezvimwe ... Inoshandisa bhatiri zvakare
Ini ndakaisa ndisina kuve mugadziri kana chero chakafanana pasina dambudziko uye maapplication ese andaimbove nawo anoramba achishanda ...
Pindura Toni Tur
Esteban Montoya akadaro
Mhoroi, ini ndatoita iyo yekuvandudza asi ndingaite sei kuti ndione kuti ndiri mune iyo GM vhezheni?
Pindura Esteban Montoya
Nenzira, ndanga ndichifunga zvekuvandudza iyo iphone6 ​​asi ndakaverenga kuti kune vanhu vanoshanda WhatsApp uye vamwe havaiti ... Vakaita sei avo vakagadziridza?
Ini ndaita yakachena kudzoreredza ios 8.4.1 uye kubva ipapo kugadzirisa kune ios 9 gm…. Ndinoda kuita kuiswa kwakachena kweiyo gm, asi ini handina account yeUDID. Ini ndingaite izvi zvakachena kudzosera zvakananga ku ios 9 gm? Kana panguva yekumisikidza nhare, ungandibvunze account ye dev?
Mhoroi, Jota. Ini handifunge kuti ichakubvunza iwe account yekuvandudza. Dai ndaizokukumbira nezvayo, ungadai usina kuiisa. Ini ndaizodzorera ndisingatyi. Mune yakashata kesi (iyo yandinofunga haizoitika kwauri), unogona kudzoreredza yekare vhezheni ine iTunes
Iwe unogona zvakare kuisa iyo 9.1 yeruzhinji beta. Yakaburitswa masikati ano uye ine emoji nyowani, senge iyo ye "atpc."
Ndakaiisa pane yangu iPhone 6 uye yakaipisisa kupfuura muIOS 8 uye yakafanana neiyo beta 5. Ini handina kuona chero kukanganisa mumaawa andakashandisa, asi handina kuifarira zvachose, mifananidzo yakawanda inopa lag shoma uye unoona kuderera kwekuita. Zvine musoro kana zvabuda zvepamutemo handizogadzirise kune iyi vhezheni, zvirinani fluidity uye kugadzikana pane kunonoka kwezvinhu zvishoma izvo zvinounzwa neshanduro. Ndinovimba 9.1 yakanyatsogadzikana uye inoyerera sezvazvakaitika muIOS 6.1 uye 7.1
Pindura kuna hectorLabra
9.1 yakaiswa pa iphone6 ​​pasina dambudziko, handina kuyedza zvakanyanya asi musimboti inoshanda nemazvo, kusanganisira whatsapp ... Zvino kugadzirisa wachi os2 gm ... Ngatione zvinoitika ...
Waita hako pablo. Ini ndakaita kwakachena kudzoreredza pasina dambudziko. Haana kundibvunza udid kana chero chinhu. Ndatenda.
Toni tur, chii chitsva muIOS 9.1 keyboard? Thanks 🙂
Mamwe mabasa ikozvino anoonekwa pane iyo ipad keyboard, kuteedzera, kunama, kusunungura, kuitazve, pakati pezvimwe zvinhu zvandingave ndisina kumboona kana kusiri munzvimbo imwechete ...
Nenzira, wachi yeapuro yakagadziridzwa kuWatch os 2 GM uye chokwadi ndechekuti izvozvi kana zviri izvo zvazvaifanira kuva ... !!!
Kune avo venyu vane yakavandudzwa iPhone uye vane wachi, unogona kugadzirisa pasina kuve mugadziri kana chero chinhu nekutevera iyi dzidziso.
Hi Javi, ndine mubvunzo, wandakatotanga kutsvaga mumaforamu nemawebhusaiti uye ini handina chandakawana, kuti ndione kana uchikwanisa kundibatsira.
Sezvo beta 5 yakabuda, ini handina kukwanisa kuita yangu iCloud backup, ini ndinowana chinhu chimwe chete pane iyo iPad (iPad Mhepo) uye pane iyo iPhone (iPhone 6 pamwe) iyo iCloud backup yaisakwanisa kupedzwa uye inoti never hapana backup yakaitwa, kuve iyo neyemberi betas, ini ndakanga ndisati ndambove nedambudziko.
Panguva yekuita nhanho, akandiudza: kuti iyo firmware haina kuenderana asi tora iyo inoenderana neyangu iphone 5s tarisa iyo modhi nezvose, mumwe munhu ndibatsireiwo ndoita sei?
Paiyo iPhone 5S, pane akati wandei mamodheru, wakatora here iyo inoenderana neyako? Tarisa kumashure, pazasi, iyo modhi inouya, ndiyo yawaifanira kunge wakadzikisira.
Kana Manuel akaiongorora nekuitora, handizive kuti sei achindiudza kuti haina kuenderana
Dhawunirodha zvakare, edza imwe sosi, pamwe iyo faira yaive yakaora kana chimwe chakadai ...
Ok ndichaedza, urikuita zvakanaka here? Chimwe chinhu Manuel panguva iyo yaakadhirowewa inotorwa pasi se .zip uye nekuti hachichizive muTunes ndaifanira kuisa magumo .ipsw, zvaigona kukanganisa chimwe chinhu? Ndosaka isingandibate? Asi kana ndikaisiya mu .zip haina kuzviziva
Shamwari iri mukati meZIP inouya iyo IPSW inova iyo chaiyo faira, unofanirwa kuiburitsa uye ndiyo yauri kuzoshandisa, kwaziso
Opios kare, kungoburitsa, ok ndichaedza uye ndikuudze zvinoitika kwandiri, ndatenda zvikuru
Ndatenda kwazvo Manuel, zvakandishandira, ini ndato gadziridza uye mune yangu iPhone 5 bhatiri riri kushanda kwazvo (pasina kuchengetedza simba) uye haina jam panguva ino, iri kuita zvakanaka.
Ruregerero mubvunzo, ndinogona here kuisa beta 9.1 yakachena kana iwe uchandibvunza ini kune udid? Kana zvichave zvirinani kukwidziridza kubva ku ios 9 gm?
Ndatenda zvikuru kune zvese uye muri nyeredzi huru 🙂
Ndakave nedambudziko rekuisa. Kana ichizotangazve mushure mekuiisa, inonamira mublock uye kubva ipapo hazviitike. Zvinoitika kwandiri pese pandinoda kuisa IOS 9 kune yangu mashanu. Iwe unoziva chero mhinduro? Iti mu iPad mini 5 ndaisa yeruzhinji kwenguva yakareba uye pasina kukundikana.
Mhoro zvakanaka kwazvo, ndine mubvunzo, ini ndaisa IOS 9 yeruzhinji beta 3. Zvino ini ndinowana gadziriso kuburikidza neOTA kuenda ku9.1 yeruzhinji beta 1, yandisina kuisa. Ini ndichawana Via OTA iyo yekuvandudza kune vhezheni 9 yekupedzisira?.
Jose Diaz akadaro
Ini ndakaisa iyo GM mune yangu ipod 5 uye zvino pandinoiisa mudoko, odhiyo haibude kuburikidza nayo, ndinogona kuimonera, kuidzora neremote control yedoko asi odhiyo haina kubuda vatauri vechiteshi, inobuda kuburikidza nemutauri weiyo ipod, Izvo zvisingawanzoitika, neiyo beta yandakanga ndamboita yaive yakakwana uye yangu iphone ine 8.4.1 zvakare yakakwana, iri shoma kwazvo. Chero ani anoziva chinhu chandingaite? seta zvakare masetingi kana chimwe chinhu? Ndatenda
Pindura kuna jose diaz
Mhoroi ini handina kuisa zvizere ios 9 Gm painodzosera kubva kufekitori ini ndinowana kukanganisa 56 mu itunes uye inogara muapuro nebhawa
Ndakagara mune yazvino yeruzhinji beta yeIOS 9.
(Uye shivirira inotsamwisa nyowani beta pop up asi hapana chiripo uye ini ndato bvisa iyo mbiri)
Mumaawa anotevera anosunungurwa neruzhinji, ndichauwana here kuburikidza neOTA?
Ndiko kuti ini handichisiri kugara pc.
Ndatenda nekundibvisa kusahadzika, nekuti vashoma vanopindura paTwitter vanozvipikisa.
Mhoro Mike. Inofanira kubuda kuti iwe isa. Zvisinei, enda kumasetter / general / profiles uye uninstall iyo beta mbiri.
Waita chinhu cheprofile.
Yangu 5S ndiyo yaunoda zvakanyanya (nekuda kwebhatiri uye kupisa zvisina kujairika iyo nyowani yekuvandudza)
Kutenda nekupindura uye ngazvive zvakadaro.
Nenzira, ini ndinokuudza Pablo, akati wandei co kana Pcalc maapps ari kutanga kugadzirisa (paPadad yatove kushanda nemaviri windows)
Uye Flipboard ine yakadzika zvinongedzo neSpotlight.
Iyo inopenda zvakanaka huh.
Kune avo vedu vane iyo iOS 9 GM vhezheni yakaiswa. Pachave nekuvandudzwa kuburikidza neOTA? Sezvo ini ndinonzwisisa ivo vakaburitsa pachena betas. Pamwe GM yangu haisi iyo yakanyanya kukwirisa uye yakaburitswa nhasi.
Pindura José David
Apple inoderedza mutengo weiyo iPhone 6, iPhone 6 Plus uye iPhone 5s
Musiyano uripo pakati pe iPhone 6s uye iPhone 6